ONE: ROOTS OF HONOR ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နာမည်ကျော်များ၏ အလဲထိုးပွဲ ၉ပွဲ | Mizzima Myanmar News and Insight /* TA: Added on nov-22-2019 */
ONE: ROOTS OF HONOR ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မည့် နာမည်ကျော်များ၏ အလဲထိုးပွဲ ၉ပွဲ
ဧပြီ ၈ ။ ။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ရှိ Mall of Asia Arena တွင် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့၌ ONE: ROOTS OF HONOR ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်စိန်ခေါ်ပွဲကြီး ၂ ပွဲနှင့် ထိပ်တန်းအလဲထိုး ကျွမ်းကျင်သူ ကိုယ်ခံပညာ သိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားသမားများစွာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်သည်။
ပါဝင်ထိုးသတ်မည့် အားကစားသမားများ၏ အံ့မခန်း အလဲထိုးပွဲများကို အားကစား ပရိသတ်များအတွက် ဖော်ပြလိုက်ရပါသည်။
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဆွတ်ခူးခဲ့သော Nguyen၏ ညာလက်သီး
ONE Championship ဖယ်သာဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ Marat “Cobra” Gafurov အား ၄၁စက္ကန့်အတွင်း ရှုံးနိမ့်ခဲ့ရသည့် ရှုံးကြွေးကို ပြန်ဆပ်နိုင်ရန် Martin “The Situ-Asian” Nguyen တောင်းတနေခဲ့သည်။ ONE: QUEST FOR GREATNESS ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ထိုအခွင့်အလမ်းကို ၎င်းက ပိုင်နိုင်စွာရရှိခဲ့သည်။
ဒုတိယအချီအစပိုင်းတွင် “Cobra’s”၏ နပမ်းချုပ်ကွက်များကို Nguyenက ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကာကွယ်ခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်ထိုးသတ်စဉ်က မရရှိခဲ့သောအခွင့်အရေးကို ကမ္ဘာ့အားကစားပရိသတ်ရှေ့မှောက်တွင် ထိထိမိမိရယူပြခဲ့သည်။ “The Situ-Asian” က ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ ရုရှားအားကစားသမားကို ရှေ့တက်အောင် မျှားခေါ်သည်။ ထို့နောက် “Cobra’s”၏ အတွင်းအနိမ့်ပိုင်း ခြေကန်ချက်တွင် အားနည်းဖြစ်ပေါ်နေသည်ကို အသုံးချခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်သူ “Cobra’s” သည် အနိမ့်ပိုင်းခတ်ခြေခတ်စဉ်တွင် ၎င်း၏မျက်နှာကို ကာကွယ်ထားရမည့်လက်မှာ အောက်ဘက်ကျနေခဲ့သည်။ Nguyen က ထိုအားနည်းချက်ကို မြင်ပြီး ထိုးစိုက်ချသည့် ညာလက်သီးချက်ဖြင့် ပြိုင်ဘက်၏မေးရိုးအား မိမိရရထိုးချလိုက်သည်။ Gafurovမှာ လက်သီးချက်ကြောင့် ကြမ်းပြင်ပေါ်လဲကျသွားခဲ့ရပြီး Nguyenက နောက်ဆက်တွဲ လက်သီးတွဲလုံးများဖြင့် ပွဲသိမ်းပေးခဲ့သည်။
၎င်း၏ ပထမဆုံးသော ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်ကာကွယ်ပွဲကို လာမည့် ဧပြီလ ၁၂ရက်တွင် ထိုးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
အကြမ်းစားပါဝါကို ပြသသည့် Jadambaa
တစ်စက္ကန့်၏ တိုတောင်းလှသော အစိတ်အပိုင်းအတွင်း ပြိုင်ပွဲကို မည်ကဲ့သို့ အဆုံးသတ်ပေးနိုင်သည်ကို Eric “The Natural” Kelly နှင့်ထိုးသတ်ခဲ့သည့် ONE: DYNASTY OF CHAMPIONS ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Narantungalag “Tungaa” Jadambaa က ပြသခဲ့သည်။
ပြိုင်ဘက်နှင့် အနီးဆုံးရင်ဆိုင်ရန် “Tungaa” သည် စက်ဝိုင်းစည်းကို ကန့်လန့်ဖြတ်ဝင်ကာ ချဉ်းကပ်လိုက်စဉ် “The Natural” က ဦးဆောင် ဘယ်ဝိုက်လက်သီးချက်ဖြင့်တုံ့ပြန်လိုက်သည်။ အဆိုပါ ဝိုက်လက်သီးချက်၏အားနည်းချက်ကို “Tungaa”မြင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် ပြိုင်ဘက်က ထပ်မံထိုးနှက်ရန် ကြိုးပမ်းချိန်တွင် Jadambaa သည် ရှေ့ကို တိုးဝင်ကပ်လိုက်ပြီး အချိန်ကိုက် ညာဖြောင့်လက်သီးပစ်သွင်းလိုက်ရာ “The Natural” လဲပြိုကျသွားသည်။ မွန်ဂိုလီးယားသူရဲကောင်း Jadambaa သည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အလဲထိုးမှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့သည်။
Jadambaa သည် လာမည့် ဧပြီလ ၁၂ရက်နေ့တွင် ONE ဖယ်သာဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့အတွက် Nguyen ကို စိန်ခေါ်ထိုးသတ် မည်ဖြစ်သည်။
Pacio ၏ အံ့မခန်းလက်ပြန်ရိုက်ချက်
ONE: LEGENDS OF THE WORLD ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် မာကျောလှသည့် Boxing ကစားသမား Roy Doliguez နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရာ Joshua “The Passion” Pacio သည် ၎င်း၏ကစားသမားသက်တမ်းတစ်လျှောက် အခမ်းနားဆုံးသော ပွဲသိမ်းထိုးချက်ကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ခဲ့သည်။
အတွင်းပိုင်း အနိမ့်ခြေခတ်ချက်ဖြင့် Doliguez ၏ ဖိအားပေးထိုးသတ်မှုကို တားဆီးရန် Pacio ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ Pacio ၏ တုံ့ပြန်မှုကို ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သည့် Doliguezကလည်း ခန့်မှန်းတွက်ဆထားနိုင်ခြင်းကြောင့် အသာနောက်ဆုတ်ရှောင်တိမ်းသည်။ Pacio သည် ဝိုက်ကန်ချက်ကို လည်ထွက်သွားအောင်ကန်ထုတ်ပြီး ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ကိုယ်အလေးချိန်အဟုန်ဖြင့် လက်ပြန်ရိုက်သည့်နည်းဖြင့် Doliguez ၏ ဖိအားပေးမှုကို ဟန့်သည်။ နှစ်ဦးကြားမှအကွာအဝေးကို Pacio ထိန်းချုပ်သည်။
ပြိုင်ဘက်၏လက်ပြန်ရိုက်ချက်ကို ပမာမပြုသော Doliguez သည် ဒုတိယအချီ ၃၈ စက္ကန့်တွင် ခြေကန်ချက်ကြောင့် လည်ထွက်သွားသည့် ကိုယ်အလေးချိန်အဟုန်ကိုသုံးပြီး လွှဲရိုက်လိုက်သော Pacio လက်ပြန်ရိုက်ချက်ကြောင့် အလဲထိုးခံသွားခဲ့ရသည်။
ONE စတောဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံဘွဲ့ကိုသိမ်းပိုက်ရန် Pacioသည် ချန်ပီယံ Yosuke “The Ninja” Saruta နှင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့တွင် တစ်ကျော့ပြန်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
အေးစက်တည်ငြိမ်သည့် El Bouni ၏ အားပါပြင်းထန်လှစွာသော လက်သီးချက်
ပွဲဦးထွက်ယှဉ်ပြိုင်သည့် ပြိုင်ဘက်ဖြစ်သူ Andre “The Giant” Meunierထံမှ လျင်မြန်သွက်လက်သော ထိုးနှက်တိုက်ခိုက်မှုများကို Ibrahim “Mr. Cool” El Bouni က မျှော်လင့်ထားပြီးသားဖြစ်သည်။ သို့သော် ၎င်း၏နာမည် “Mr. Cool” ဆိုသည့်အတိုင်း ပြိုင်ဘက်၏ လက်သီးမုန်တိုင်း အပေါ် ၎င်း၏ တုံ့ပြန်မှုက အေးစက်တည်ငြိမ်နေသည်။
ပြိုင်ဘက် သြစတေးလျကစားသမား ရှေ့တက်ပြီး ပြင်းထန်သော ညာလက်သီးချက်ဖြင့် ထိုးသတ်သည်ကို “Mr. Cool”က တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ဖြင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သည်။ ပြိုင်ဘက် Meunier လဲပြိုကျသွားပြီး အမှတ်စဉ်ရေတွက်ခံရသော်လည်း ပြန်ထနိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာမီပွဲသိမ်းတော့မည်ကို “Mr. Cool”က သိရှိနေခဲ့သည်။ ပွဲချိန် ၉၁စက္ကန့်အရောက်တွင် ပြိုင်ဘက် Meunier အား ပြင်းထန်အားပါလှစွာသော ဘယ်ညာလက်သီးတွဲလုံးများဖြင့် “Mr. Cool”က တလစပ်ထိုးနှက် အလဲထိုးခဲ့သည်။
မော်ရိုကိုအားကစားသမား “Mr. Cool” သည် လာမည့် ဧပြီလ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ONE စူပါစီးရီး လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ကစ်ဘောင်ဆင် ထိုးသတ်ပွဲအဖြစ် Andrei “Mister KO” Stoica နှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်ရာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ပွဲသိမ်းတိုက်ခိုက်မှုကို မြင်တွေ့ရှုစားရ မည်ဖြစ်သည်။
ပွဲသိမ်းအမြန်ဆုံးဖြစ်စေခဲ့သော Santos ၏ ဘယ်ခြေကန်ချက်
ONE: PURSUIT OF GREATNESS ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် ဘရာဇီးကစားသမား Luis “Sapo” Santos သည် ပြိုင်ဘက် ဂျပန်ကစားသမား Daichi Abe ကို ပွဲစစချင်း တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့သည်။ Santos သည် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်သဖွယ်ဖြစ်သော ဘယ်ခြေကန်ချက်ဖြင့် စတင် တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာ ပြိုင်ဘက် Abe၏ အားနည်းချက်ကို မြင်ခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် Santos သည် လိုက်လံဖိအားပေးတိုက်ခိုက်ရင်း ပြိုင်ဘက်၏အလယ်ပိုင်းကို ဘယ်ခြေဖြင့် အပိုင် ခတ်နိုင်မည့်အခွင့် အလမ်းကို ချောင်းမြောင်းနေခဲ့သည်။ ကန်ချက်မှာ အတိအကျ ထိမှန်သွားခြင်းကြောင့် ဂျပန်ကစားသမား Daichi သည် ကြမ်းပြင်ပေါ် လဲပြိုကျသွားခဲ့ပြီး Santos သည် ONE ဝယ်တာဝိတ်ပြိုင်ပွဲသမိုင်းတွင် အမြန်ဆုံးပွဲသိမ်းသည့် မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့သည်။
Santos သည် ONE ဝယ်တာဝိတ်ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံခါးပတ်အတွက် မနီလာမြို့တွင် ရှုံးပွဲမရှိသေးသော အမေရိကန် ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားသမား James Nakashima နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုးသတ်မည်ဖြစ်သည်။
မြန်ဆန်သပ်ရပ်လွန်းသော Kelly၏ တွဲလုံးများ
ONE: GLOBAL SUPERHEROES ပြိုင်ပွဲတွင် ပြိုင်ဘက်Meas Meul အား Edward Kelly သည် တွဲလုံးသုံးခုကိုအသုံးချပြီး ၂၁ စက္ကန့်အတွင်း အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့သည်။
ကမ္ဘောဒီယားကစားသမား Meas Meul က အနိမ့်အတွင်းပိုင်းခတ်ခြေဖြင့်တိုက်ခိုက်ရာ Kelly က ညာဖြောင့်လက်သီး၊ ဘယ်ဝိုက် လက်သီးတို့ဖြင့် တန်ပြန်တိုက်ခိုက်သည့်အပြင် ပွဲသိမ်းစေမည့် ညာဝိုက်ကန်ချက်ဖြင့် တရစပ်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Meul က လက်သီး ချက်များကြောင့် ဦးခေါင်းကို ငုံ့ထားရာ Kelly ၏ ဝိုက်ကန်ချက်လမ်းကြောင်းအတိုင်းတက်လာသည့် ဒူးဖြင့် မိတ်ဆက်မိပြီး ပွဲသိမ်းသွားခဲ့သည်။
Kelly သည် လာမည့် သောကြာနေ့တွင် ပြိုင်ဘက် Sung Jong Leeအား ထိုးသတ်ရာတွင်လည်း အလားတူ ရလဒ်မျိုးဖြင့် ပွဲသိမ်း ရန် မျှော်လင့်နေမည်ဖြစ်သည်။
“The Natural” Takes Out A Legend
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ONE Championship ၏ ONE: PRIDE OF A NATION ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် နာမည်ကျော်ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံ အားကစားသမား Jens “Lil’ Evil” Pulver အား ဖိလစ်ပိုင်မှ Eric “The Natural” Kelly သည် ပြောင်မြောက်စွာ အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့သည်။
ဖယ်သာဝိတ်ပြိုင်ပွဲဝင်နှစ်ဦးသည် ပထအချီတစ်လျှောက်လုံးပရိသတ်အကြိုတ်တွေ့စေမည့် သတ်လုံးသတ်ပေါက်များ၊ချုပ်ကွက်များဖြင့် ရင်ဆိုင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့သည်။ ဒုတိယအချီတွင် Kelly သည် ဆက်လက်တိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ရာ အမေရိကန် Jens “Lil’ Evil” Pulverမှာ မခုခံနိုင်တော့ဘဲ လက်ရည်ကျဆင်းလာခဲ့သည်။ Kelly က ထိုအခွင့်အရေးကို အပိုင်အနိုင်အသုံးချပြီး ပြိုင်ဘက်၏ ကိုယ်အလယ်ပိုင်းကို ဝိုက်ခြေဖြင့် အပိုင်ခတ်ရာ အမေရိကန် Pulver ပြိုလဲကျသွားခဲ့သည်။ ထို့နောက် Kelly က လက်သီးတွဲလုံးများဖြင့် ပွဲသိမ်း ပေးခဲ့သည်။
Kelly သည် ONE: ROOTS OF HONOR ပြိုင်ပွဲတွင် Kwon Won Ilနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Kwon ၏ ကြောက်မက်ဖွယ် ညာဖြောင့်လက်သီး
ONE: ETERNAL GLORY ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် Anthony “Archangel” Engelen အား ၆၇ စက္ကန့်ဖြင့် အလဲထိုးအနိုင်ယူကာ “Pretty Boy” Kwon Won Il သည် ၎င်း၏ကိုယ်ခံပညာသိုင်းပေါင်းစုံအားကစားအရည်အသွေးကို ကမ္ဘာ့ပရိသတ်အား ပြသခဲ့သည်။
တက်သစ်စအားကစားသမားဖြစ်သော Kwon Won Il သည် Engelen အား လိုက်လံထိုးသတ်ရင်း ၎င်း၏လက်တံအကွာအဝေး ရောက်နိုင်စွမ်းအား ထိထိမိမိအသုံးချခဲ့သည်။ ဒက်ချ်-အင်ဒိုနီးရှားကစားသမား Engelen ထံမှ တုံ့ပြန်မှုရရှိရန် Kwon Won Il သည် ဘယ်ထောက်လက်သီးဖြင့် ဟန်ပြတိုက်ခိုက်လိုက်သည်။ ပြိုင်ဘက် Engelen က လက်သီးချက်ကို ကာကွယ်ရန်ကြိုးစားစဉ် အကာအကွယ်မဲ့သွားသည့်မျက်နှာအား မိုးကြိုးပစ်ဘိသကဲ့သို့ လျင်မြန်အားပါလှသော ညာဖြောင့်လက်သီးဖြင့် Kwon Won Il က အလဲထိုးလိုက်သည်။
အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် Kwon Won Il သည် လာမည့်သောကြာနေ့တွင် Eric Kellyအားယှဉ်ပြိုင်ပြီး ONE Championship ပြိုင်ပွဲ၌ ဒုတိယအကြိမ်အနိုင်ပွဲရရှိရန် ကြိုးပမ်းသွားမည်ဖြစ်သည်။
ONE: PURSUIT OF GREATNESS ပြိုင်ပွဲကြီးတွင် အာဖရိကန်မှ Ahmad “Lycan” Qais Jasoor သည် “Tank” Ma Xu Dong နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ထိုး သတ်ခဲ့ရာ ဒုတိယအချီ အလဲထိုးဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။
Jasoor၏ ဘယ်ဖြောင့်လက်သီးချက်ကြောင့် ပြိုင်ဘက် Ma Xu Dong မှာ ယိုင်ထွက်သွားခဲ့ရာ အာဖရိကန်ကစားသမားက ပြင်းထန်အားပါလှသော ဝိုက်လက်သီးများဖြင့် လိုက်လံထိုးနှက်ပြီး အလဲထိုးအနိုင်ယူခဲ့သည်။ ဒိုင်လူကြီး Yuji Shimadaက ပွဲရပ်တန့်ရန် မဝင်လာမချင်း ၎င်းက လက်သီးချက်များဖြင့် ပြိုင်ဘက်ကို တရစပ် ထိုးနှက်နေခဲ့သည်။
မနီလာမြို့တွင် ကျင်းပမည့်ပွဲစဉ်၌ Jasoor သည် တရုတ်ပြိုင်ဘက် “The Stalker” Xie Bin နှင့် ယှဉ်ပြိုင်ပြီး ပွဲဆက် အနိုင်မှတ်တမ်း တင်နိုင်ရန် မျှော်မှန်းနေသည်။
ဟာဇက် ဒီရာသီ ပြန်ကစားနိုင်မလားဆိုတာ မသေချာတော့ဘူးလို့ ဇီဒန်း ထုတ်ဖော်...
ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်နေ့အတွက် MizzimaTV ရုပ်သံလိုင်းရဲ့ တစ်နေ့တာ အစီအစဉ်...
ONE: ROOTS OF HONOR ပြိုင်ပွဲ